गोधुली फुटबल रनिङ कप भोली शनिवारदेखि – दिव्य रोशनी अनलाईन
गोधुली फुटबल रनिङ कप भोली शनिवारदेखि
दिव्य रोशनी(धरान)/ भोली शनिवारदेखि गोधुली फुटबल रनिङ कपको २२ औं संस्करण शुरु हुने भएको छ।
पुष २४ देखी माघ ९ गतेसम्म आयोजना हुने प्रतियोगितामा धरानका २० वटै वडाले सहभागिता जनाउने भएको छ। प्रतियोगिताबारे आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक गोधुली क्लबका उपाध्यक्ष शतिस केसीले फुटबल प्रयिोगिताले खेलाडहरुका लागि आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर रहेको बताए। उनले धरान १६ स्थित धरान रंगशालामा हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको समेत जानकारी दिए।
उपाध्यक्ष केसीका अनुसार यसवर्ष प्रतियोगितामा पुरस्कार राशीमा वृद्धि गरिएको छ। जसमा बिजेताले नगद १ लाख ५० हजारका साथमा ट्रफि र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्भने उपबिजेताले नगद ७५ हजारका साथमा ट्रफि र प्रमाणपत्र पाउने छन्। यसअघि बिजेताले १ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ र उपबिजेताले ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका थिए। विजेता उपविजेतालाई १८ नंं वडाका वडाध्यक्ष प्रविण राई र उनका बुवा ध्यानबहादुर राईले पनि थप २५÷२५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएका छन्।
यसैगरी प्रतियोगितामा वेष्ट प्लेयर खेलाडीले नगद १५ हजार, हाईस्कोररले ७ हजार ५ सय, वेष्ट डिफेन्डर, म्यान अफ दि म्याच, वेष्ट गोलकिपर, वेष्ट कोच, वेष्ट स्ट्राईकर, राईजिङ प्लेयर र वेष्ट मिडफिल्डरले जनही नगद ५ हजार ५ सय प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा कुल १३ लाख ९६ हजारको अनुमानित लागत रहेको छ।
यसैगरी प्रतियोगितामा टप ८ भित्र पर्न सफल हुने वडाहरुले उप–महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने स्व. सुवास राई स्मृति सुपर लिगमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। प्रतियोगितामा हालसम्म धरान १९ नं. वडा सर्वाधिक ६ पटक विजयी भएको छभने ८ न.ं वडा चारपटक र ११ र १७ नं. वडा तिन पटक विजयी बनिसकेको छ।
← तिनदिने “धरान डे” सम्पन्न
पुष महिनामा २४ जनामा ओमिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि →